MACLUUMAADKA TARANKA EEYGA ALSATIAN EE MAREYKANKA IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyga Alsatian ee Mareykanka iyo Sawiro
Hector the American Alsatian oo hal sano jir ah— 'Hector waxaa lagu dhaawacay Schwarz Kennels ee Oregon hadana wuxuu ku nool yahay Yurub.'
Alsatian-ka Mareykanka waa eey wehel ah oo aad u tiro badan. Koodhkiisu dhererkiisu waa dhexdhexaad wuxuuna noqon karaa mid dahabi ah, qalin ah, midab madow ama kareemo. Midabaynta qalinka siliga ah ayaa ah tan ugu caansan. Calaamadaha calaamadaha cad ama madow waa kuwo aad dhif u ah. Indhuhu waxay u dhexeeyaan bunni khafiif ah illaa huruud waxayna u eg yihiin yicib u eg cirro yeey ah. Dhegaha ayaa istaaga oo dabada caarada miiqan ayaa hoos u laalaada iyadoo taabanaya baallooyinka. Madaxa iyo miskaha way ballaadhan yihiin oo leh af adag oo xoog leh. Suulasha waxyar ayaa la kala sifeeyaa lafaha lugtuna waa waaweyn yihiin waana wareegsan yihiin. Laabta ayaa qoto dheer jirkuna waa ka dheer yahay dherarka.
Alsatian-ka Mareykanka waa eey wehel u ah qoyska. Aad ayey daacad ugu yihiin xubnaha qoysaskooda waxayna aqbalaan carruurta iyo xayawaanka kale . Alsatian Mareykan ah ayaa ka fog shisheeyaha, laakiin waligiis cabsi ma leh ama dagaal badan. Iyagu waa feejigan yihiin oo caqli badan yihiin, si dhakhso leh ayey wax u bartaan waxayna ka jawaabi doonaan dhawaqyada ugu jilicsan. Qiyaasta saxda ah ee jimicsiga American-ka Alsatian waa mid aad u deggan oo deggan, xitaa marka keligiis looga tago muddo dheer. Iyagu ma bilaabaan ciyaarta ilaa la dhiirrigeliyo mooyee. Noocani wuxuu u eg yahay inuu leeyahay ugaarsi hoose iyo heer dhaqdhaqaaq. Iyagu ma lihi u janjeera inay qayliyaan, ooyaan, qoddaan ama ku ordaan deedka. Waxay si fiican uga jawaabaan sixitaanka fudud. Onkodka ama rasaasta qoryaha wax dhib ah malahan. Sababtoo ah Alsatian-ka Mareykanka wuxuu aad ugu xiran yahay qoyskiisa, waxay si sahal ah u doortaan inay ku dhowaadaan raaxada guriga. Bulsho si fiican. Hubso inaad had iyo jeer noqoto eeygaaga hogaamiye xirmo joogto ah .
Dhererka: Ragga qaangaarka ah 25 - 28 inji (63.5 - 71 cm) Dumarka qaangaarka ah 24 - 27 inji (61 - 68.5 cm)
Miisaanka: Ragga qaangaarka ah 79 - 120 rodol (36 - 55 kg) Haweenka qaangaarka ah 75 - 100 rodol (34 - 45 kg)
liistada eyga oo buuxa
Sannadkii 2009, hal eey ayaa suuxdin ku dhacay. Aasaasuhu wuxuu ku boorinayaa dhammaan milkiilayaasha eyda khadadka Beamer inay si dhakhso leh u soo sheegaan calaamadaha suuxdinta Dhibaato caafimaad oo kale lama soo kulmin tan iyo 2003, markaas oo laba eey ay soo wajahday xaalad daran arthritis .
Alsatian-ka Mareykanka wuxuu si wanaagsan ula qabsaday deegaanno badan oo nool. Noocani uma baahna boos badan. Waxay leeyihiin laba jibbaar dhumuc weyn oo ma jecla kuleylka daran. Ka taxaddar inaad eeygan ku qaboojiso bey'adaha kulul, adoo siinaya biyo badan iyo hadh.
Alsatian-ka Mareykanka ah waa deggan yahay oo xasilloon inta badan maalinta. Noocani uma baahna jimicsi sida Adhijirka Jarmalka laakiin wali u baahan a socod maalinle ah . Waxay jecel yihiin inay u soo lugeeyaan beerta nasashada, laakiin way gaabiyaan oo xaalufiyaan markii la weydiisto inay shaqeeyaan. Waxay doorbidaan shaqada dagan ee eeyaha daaweynta .
Celcelis ahaan 12 - 14 sano.
Alsatian Mareykan ah wuxuu u baahan yahay cadayasho joogto ah agagaarka dhagaha iyo dhabarka lugaha. Waxay u daadiyaan wasakh si fudud shaadhadooduna way ka madhan tahay ur. Hal mar ama laba jeer sanadkiiba, waxay kuxirantahay cimilada, American-ka Alsatian wuxuu ubaahanyahay in lasii cadeeyo markii jaakadu dabacsantahay oo ay bilaabayaan inay daadiyaan.
Laga bilaabo Febraayo 21, 2010, magaca rasmiga ah ee faracdan waxaa laga beddelay Alsatian Shepalute loona beddelay Alsatian Mareykan ah. Waxaa beddelay guddiga oo ay ansaxiyeen xubnuhu.
Jiilkii ugu horreeyay ee Mareykan ah Alsatian waxaa laga diiwaangaliyay 1988 gudaha Mareykanka oo ay dhigteen Naadiga Waqooyiga Ameerika ee Shepalute (tan iyo markii loo bixiyay Naadiga Alsatian ee Qaranka Mareykanka). Noocani wuxuu hayaa shan eey oo saafi ah xariiqyadiisa: the Alaskan Malamute , ah Eyga Adhijirka ah ee Jarmalka , ah Pyrenees weyn , ah Adhijirka reer Anatolia , iyo Ingiriisi Mastiff . In ka badan 20 sano oo taran xulasho ah, kaliya arday caan ah oo la soo xulay ayaa la soo saaray kuwaas oo leh astaamaha la doonayo eeyga wehel u ah. Sannadkii 2000 wuxuu ahaa sanadkii ugu horreeyay ee Alsatian Mareykan ah loo soo bandhigo dadweynaha Mareykanka, maaddaama ay ugu dambeyn la jaan qaadayaan heerarka taranka ee uu dejiyay aasaasaha isirka, Lois Denny sanadkii 1987.
sawiro jilicsan oo sarreen ah
NASR - Diiwaanka Alsatian Ameerikaanka Qaranka
NAAC - Naadiga Alsatian ee Qaranka Mareykanka
Hector the American Alsatian hal sano jir ah, oo uu ku dhajiyay Schwarz Kennels ee Oregon
Khoshekh (bidix) iyo Maddy (midig) eeyaha Alsatian Ameerikaanka ah ee jira 4 sano— 'Khoshekh iyo Maddy waxay ku noolyihiin Nashville, TN waxayna ku raaxeystaan ​​socodka, seexashada, iyo istiqfaarta. Aad ayay u hooseeyaan oo waa saaxiibtinimo. '
Jiilaal Ameerikaanka Ameerikaanka ah ee cunista cayriin macnaheedu waa cawska. Waxaa lagu dhaawacay Schwarz Kennels ee Oregon, wuxuu ku nool yahay Columbia, MD. Sawir laga qaaday maalin ka hor inta uusan gaarin 9 bilood.
Xilliga Jiilaalka Alsatian-ka Mareykanka ah ee 9 bilood jira cunista ceyriinka waxaa loola jeedaa cawska. Waxaa lagu dhaawacay Schwarz Kennels ee Oregon, wuxuu ku nool yahay Columbia, MD.
Xilliga Jiilaalka Alsatian-ka Mareykanka ah ee 9 bilood jira cunista ceyriinka waxaa loola jeedaa cawska. Waxaa lagu dhaawacay Schwarz Kennels ee Oregon wuxuuna ku nool yahay Columbia, MD.
Xilliga Jiilaalka Alsatian-ka Mareykanka ah ee 9 bilood jira cunista ceyriinka waxaa loola jeedaa cawska. Waxaa soo saaray Schwarz Kennels oo ku yaal Oregon, wuxuu ku nool yahay Columbia, MD.
Jiilaalka Alsatian-ka Mareykanka ah ee 9 bilood jira isaga iyo saaxiibkiis Chihuahua. Jiilaalka waxaa lagu soo barbaaray Schwarz Kennels ee Oregon, wuxuu ku nool yahay Columbia, MD.
'Tani waa Jojo oo ka timi Gobolka Washington hal sano jir. Waa 120 rodol, dhererkiisuna waa 27 inji Wuxuu tababar ugu jiraa inuu noqdo eey dabiici ah. '
'Gacaliye Prudence waa 10-bilood jir Mareykan ah Alsatian. Waxay ku nooshahay Vallecito Alsatians oo ku taal Colorado Rocky Mountains.
Xilliga Jiilaalka Alsatian-ka Mareykanka ah eey ahaan u cunay Schwarz Kennels ee Oregon oo hadda ku nool Columbia, MD.
Jiilaal Alsatian Mareykan ah sida eey ku raaxeysta hilibkiisa ceyriin.
Xilliga Jiilaalka Alsatian-ka Mareykanka ah eey ahaan u cunay Schwarz Kennels ee Oregon oo hadda ku nool Columbia, MD. Halkan waxaa lagu muujiyey isaga oo qashinkiisa gadaashiisa ka dambeeya.
Xilliga Jiilaalka Alsatian-ka Mareykanka ah eey ahaan u cunay Schwarz Kennels ee Oregon oo hadda ku nool Columbia, MD. Halkan waxaa lagu muujiyey sida eey yar.
Sawirada Alsatian Ameerika 1
Liiska Noocyada Eeyaha Adhijirka ah
cad iyo brindle american bulldog
eey weyn oo waji madow leh
adhijirka jarmalka oo lagu qasay alaskan husky
sawirada yorkie shih tzu mix
wolfhound Irish isku darka mastiff ingiriisiga